Maka: Ifoto yokufota | Martech Zone
Maka: ifoto yokufota
NgoMvulo, Novemba 30, 2020 NgoLwesibini, nge-22 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
Ukuba awulandeli uJoel Comm, yenze. Ngoku. UJoel yenye yezixhobo zam endizithandayo kwitekhnoloji. Ulungile, uthembekile, kwaye ubala ngokucacileyo. Akukho suku ludlulayo ndingakhange ndingene kwinto ayifumeneyo ngokulandelayo… kwaye namhlanje ibiyinto enkulu! UJoel makazise wonke umntu ngesixhobo esitsha kwi-Intanethi, susa.bg. Isixhobo sisebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ukuhlalutya imifanekiso nabantu kwaye sisuse ngokuchanekileyo nangokugqibeleleyo imvelaphi. Ukuba
Umhleli weVecteezy: Umhleli weSVG weSimahla kwi-Intanethi
NgoLwesihlanu, ngoJuni 23, 2017 NgoLwesihlanu, ngoJuni 23, 2017 Douglas Karr
Iibrawuza zangoku zenza umsebenzi omkhulu zixhasa ifomathi yemizobo yevektha enokusasazeka (SVG). Ukuba uyazibuza ukuba kuthetha ntoni loo gobbledygook, nantsi ingcaciso ekhawulezayo. Masithi unesiqwenga sephepha segrafu kwaye ufuna ukuzoba ibha ezantsi ephepheni, ugcwalise izikwere ezili-10. Ugcwalisa isikwere ngasinye ngokuzimeleyo ngesitikha esibhaliweyo kwaye urekhode isikwere u-x no-y wokulungelelanisa ukukhumbula ukuba zeziphi ozigcwalisileyo.
Isikhokelo kuyilo lweJaggon
NgeCawa, ngo-Novemba 10, 2013 NgoMvulo, Novemba 11, 2013 Douglas Karr
Ukuba uluhlobo lwentengiso olunokuthetha nge-jargon kunye nesicwangciso-qhinga, mhlawumbi wenza umsebenzi omkhulu kule mihla. Sithetha nabantu be-IT, ababhekisi phambili kunye nabayili… kwaye kufuneka siguqulele phakathi kwabo bonke! Crafted yi-arhente yedijithali ephumelele amabhaso ephuhlise le infographic entle ukunceda abantu baqonde iimodeli zemibala kunye neefomathi zefayile. Ngezixhobo zale mihla ezinobunzima beemifanekiso ezininzi kunye neefomathi zefayile kunye noxinzelelo olunikezela ngesantya sokulinganisa kunye